Goth, 18.3, Tovo J’hay, Henri R…. : manomana seho maro amin’ity taona ity ny Fetoo | NewsMada
Goth, 18.3, Tovo J’hay, Henri R…. : manomana seho maro amin’ity taona ity ny Fetoo
Efa nisy ny hetsika andrana nataon’izy ireo. Fantatra kosa izao fa hanampy isa ireo trano mpamokatra fampisehoana eto an-toerana ny Fetoo Madagascar. Nisy ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, omaly tetsy amin’ny Skandal Buffet Ankorondrano, nanambaran’izy ireo ny vaovao.
“Hampiroborobo ny mozika malagasy eto an-tanindrazana sy any ivelany no tanjona”, hoy ny nambaran-dRajery. Izy tokoa mantsy no nosafidina ho tale ara-javakanton’ny Fetoo Madagascar. Tsy tongatonga ho azy izany, fa noho ny traikefa ananan’ity mpanakanto ity eo amin’ny sehatry ny fikarakarana lanonana sy ny mozika amin’ny ankapobeny.
“Maromaro ny fandaharam-potoana nomaninay amin’ity taona ity. Maromaro toa izany koa ireo mpanakanto hiaka-tsehatra. Tsy fampisehoana ihany anefa fa mikarakara hetsika maro izahay ka izay no nahatonga ny anarana”, hoy ny nambaran-dRakotoarisoa Zolala, tompon’andraikitra ao amin’ny Fetoo.
Mivelatra amin’ny karazana mozika
“Tsy mionona amin’ny karazana mozika iray fa misokatra amina mpanakanto maro izahay”, hoy ny nambaran-dRajery. Porofon’izany, manomboka amin’ny hatsikana iarahana amin’i Gothlieb, mandalo ny rap miaraka amin’ny 18.3, ny Rn’b miaraka amin’i Tovo J’hay, hatramin’ny hira tsy tontan’ny elan’i Henri Ratsimbazafy, handalo avokoa amin’ity taona ity.
Hosokafan’izy ireo amin’ny hatsikana iarahana amin’i Syrila sy Gothlieb izany ny 10 marsa, ao amin’ny Skandal Buffet. Hitohy amin’ny “Daka tranom-bitsika” hataon’i Gothlieb ao amin’ny Dôme Ankorondrano kosa ny 12 marsa. Hisesy aorian’izay ry 18.3, Da Hopp, Tovo J’Hay, Momota, Groupe Aina, sns.
Araka ny fampitam-baovao hatrany, anisan’ny hetsika goavana indrindra homanin’ny Fetoo amin’ity ny fampiakarana an-tsehatra an’i Henri Ratsimbazafy ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. “Matahotra mafy aho ny hiatrika izany seho izany”, hoy ity mpanakanto andrarezina ity. “Aleo homem-boninahitra ny mpanakanto dieny mbola velona”, hoy kosa ry zareo mpikarakara.